မူလစာမျက်နှာအီလက်ထရောနစ် Air ကို Humidifier ပြီးတော့ Air ကိုစင်ကြယ်စေ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Air ကို Humidifier မူလစာမျက်နှာအီလက်ထရောနစ်,မူလစာမျက်နှာ Humidifier နှင့် Air စင်ကြယ်စေ,မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကော့စ
Home > ထုတ်ကုန်များ > မူလစာမျက်နှာ Humidifier > မူလစာမျက်နှာအီလက်ထရောနစ် Air ကို Humidifier ပြီးတော့ Air ကိုစင်ကြယ်စေ
ဤသည် ultrasonic humidifier ဒီဇိုင်းဝတ္ထု, ခေတ်သစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပေါင်းစပ်ဟာအရှေ့တိုင်းအမွှေးအကြိုင်ယဉ်ကျေးမှု, ထူးခြှနျအမှုန်၏5မိုက်ခရွန်ကိုလေပေါ်မှာပမှ ultrasonic ultrasonic တုန်ခါမှုစက်ရုံရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှင့်ရေကို အသုံးပြု. ၏နိယာမ, အနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုထုတ်လုပ်လေကြောင်း humidifier ပိုဖြစ်ပါတယ် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှူသွင်းမိစေဖွယ်ရှိ, သဘာဝရနံ့ကုထုံအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝဆော့ကစားပေး, သင်ကျန်းမာအာရုံကြောအောင်မြင်ရန်, စိတ်ဖိစီးမှုအလုပ်အသက်တာ၌အနားယူကူညီဖို့, အရေပြားအသားအရေစိုပြေအကျိုးသက်ရောက်မှု။
နွေး prompt ကို: အနံ့ humidifier ထိရောက်စွာအိပ်ပျော်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုငျသောရနံ့ကုထုံဆီအေးဆေးတည်ငြိမ်အသုံးပြုခြင်း, နှင့်တကွ, အိပ်ခန်းသုံးစွဲဖို့ပိုကောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဤသည်ရနံ့ကုထုံ humidifier တစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့မွှေးအခိုးအငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်, ချက်ချင်းအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာရေငွေ့ ပြန်. တဖန်မှ Ultrasonic လှိုင်းတံပိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Air ကိုသန့်ရှင်းစေ။ ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ရေး humidifier သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် deodorize သင်အသက်ရှူလေ, ဓာတ်မတည် / မြက်ပင်ဖျားနာ, ပန်းနာရင်ကြပ်, အအေး & တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေ, နှင်းခူ / psoriasis, emphysema, etc သက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီနိုင်သည့်လိမ့်မယ်
သင့်ရဲ့လေကြောင်း Humidify ။ ဆောင်းရာသီတွင် & ခြောက်သွေ့သောလေထုအရေပြား dehydrates ဘယ်မှာလေအေးပေးစက်အခန်းအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သော။
သင့်ရဲ့သုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်။ သစ်သားဘောဇဉ်ပျံ့စိတ်ဖိစီးမှု, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းသေချာ၏ခံစားချက်များကိုသက်သာရာ, အောက်စီဂျင်၏စီးဆင်းမှုတိုးပွါးသောအနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းလူစုခွဲပါတယ်။
အနိမျ့ဆူညံသံ။ Ultrasonic ပျံ့ 35 DB အောက်မှာပိုလျှံဆူညံသံမပါဘဲအေးမြ humidifying အခိုးအငွေ့များကိုတိတ်တဆိတ်ပြေး။
ချွေ safe & စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန။ 400ml စွမ်းဆောင်ရည်။ 14h ၏အလုပ်အဖွဲ့အချိန်။ အော်တို / ပိတ်ရေအနိမျ့အလုပ်လုပ်စေပြီးလျှင်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ Ultrasonic အနံ့ပျံ့စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာအားဖြင့်ခြုံငုံ Mood ရုပ်သိမ်းအပျက်သဘောဆောင်သောအိုင်းယွန်း & အကူအညီဖြင့်ထုတ်လွှအားဖြင့် Air ကိုအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
ရောင်စုံဘဝ။ built-in7အရောင် LED ညဥ့်အလင်း။ သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင် Set သို့မဟုတ်အရောင်လှည့် option ကို select လုပ်ပါ, ကအိပ်ခန်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအေးမြခိုးအငွေ့ humidifier အောင်။
700ML လုံးလုံးအိမ်ရေနွေးငွေ့စိုထိုင်းဆကြီးမားသောစွမ်းရည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Air ကို Humidifier မူလစာမျက်နှာအီလက်ထရောနစ် မူလစာမျက်နှာ Humidifier နှင့် Air စင်ကြယ်စေ မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကော့စ Mini ကို Humidifier မူလစာမျက်နှာ ပျံ့မူလစာမျက်နှာအပြင်အဆင် မူလစာမျက်နှာအလင်းပျံ့ မူလစာမျက်နှာနေထိုင်မှုပျံ့ မူလစာမျက်နှာမြူခိုးပျံ့